Ungayifaka kanjani i-iOS 13 noma i-iPadOS ku-iPhone yakho noma i-iPad | Izindaba zamagajethi
Njalo lapho i-Apple, noma enye inkampani ikhipha inguqulo entsha noma ukuvuselelwa kohlelo lwayo lokusebenza, kungakuhle ukuthi ulinde usuku ukuqinisekisa ukuthi ayinazo izinkinga zokusebenza ezingase thola ukukhubaza idivayisi yethu. Kepha yilokho okwenzelwe ama-betas.
Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa zama-betas, inkampani yaseCupertino ikhiphe le nguqulo, ngakho-ke izinzile, iOS 13, inguqulo entsha ye-iOS enikeza ukuvelela okukhulu ku-iPad. Eqinisweni, inguqulo ye-iPad iqanjwe kabusha i-iPadOS. Lapha sikukhombisa uyifaka kanjani i-iOS 13 / iPadOS ku-iPhone yakho noma i-iPad.
Yini okusha ku-iOS 13
Ngaphambi kokubuyekeza idivayisi yethu kufanele hlola ukuthi i-iPhone yethu noma i-iPad ayihambelani yini ngale nguqulo entsha ye-iOS. I-Apple igxile kuyo yonke imizamo yayo nge-iOS 12 ekwenzeni ngcono ukusebenza kwayo, into efinyelele ngempumelelo enkulu, ngisho nakumadivayisi amadala, okwakuyinkomba yokuthi i-iOS 13 ngeke ihambisane namatheminali afanayo ne-iOS 12.
1 IOS 13 Amadivayisi Ahambisanayo
1.1 I-iPhone iyahambisana ne-iOS 13
1.2 I-iPad iyahambisana ne-iOS 13
1.3 I-iPhone ne-iPad ayihambisani ne-iOS 13
2 Ungayifaka kanjani i-iOS 13
2.1 Isipele nge-iTunes
2.2 Isipele nge-iCloud
3 Ibuyekeza ku-iOS 13
3.1 Vuselela ku-iOS 13 kusuka ku-iPhone noma ku-iPad
3.2 Vuselela ku-iOS 13 kusuka ku-iTunes
IOS 13 Amadivayisi Ahambisanayo
IOS 13 iyahambisana nawo wonke lawo matheminali aphethwe yi-2 noma ngaphezulu i-GB ye-RAM. Ngale ndlela, uma une-iPhone 6s kuya phambili noma isizukulwane sesibili se-iPad Air unethuba lokuvuselela ku-iOS 13.
Uma, ngakolunye uhlangothi, une-iPhone 5s, i-iPhone 6, i-iPad Air noma i-iPad mini 2 no-3, kuzofanele hlala ngokunamathela ku-iOS 12, inguqulo enikeza ukusebenza abaningi abebengayifuna kunguqulo ye-iOS yamadivayisi abo eyekile ukuthola izibuyekezo kudala.
I-iPhone iyahambisana ne-iOS 13
I-iPhone XS Max
I-iPhone 11 (imboni ithunyelwe nge-iOS 13)
I-iPhone 11 Pro (ifektri ithunyelwe nge-iOS 13)
I-iPhone 11 Pro Max (zifika zivela efektri zine-iOS 13)
I-iPad iyahambisana ne-iOS 13
I-iPad Pro 12,9-intshi (wonke amamodeli)
I-iPhone ne-iPad ayihambisani ne-iOS 13
I-iPad Air (isizukulwane sokuqala)
Ungayifaka kanjani i-iOS 13
Ngemuva konyaka nge-iOS 12, idivayisi yethu iyi- igcwele amafayela angenamsoco ezikhiqize izinhlelo zokusebenza esizifakile kudivayisi yethu, ngakho-ke yisikhathi esihle sokuhlanza isileyiti. Okusho ukuthi, kufanele siqhubeke nokusula yonke idivayisi yethu ukwenza ukufakwa okuhlanzekile, kusukela ekuqaleni, ngaphandle kokuhudula izinkinga zokusebenza noma zesikhala okungenzeka ukuthi idivayisi yethu ihlupheka.
Uma singakwenzi, kungenzeka ukuthi idivayisi yethu yenzeke ayisebenzi ngokugculisayonjengoba kuthintwa izinxushunxushu zangaphakathi ngendlela yezinhlelo zokusebenza / amafayela angasetshenziswanga kepha asekhona kudivayisi.
Uma senza ukufaka okuhlanzekile kwe-iOS 13 futhi sibuyisela isipele, sizothola inkinga efanayo ukuthi uma sivuselela ngqo idivayisi yethu nge-iOS 12 kuya ku-iOS 13 ngaphandle kokusula konke okuqukethwe kuyo.
Uma usafuna ukubuyekeza i-iOS 13 kusuka ku-iOS 12, into yokuqala okufanele uyenze ukwenza isipele. Ukufaka inguqulo yesistimu yokusebenza ngaphezulu kwenguqulo yangaphambilini kungadala ukungasebenzi kahle lokho siphoqe ukuba sibuyisele idivayisi yethu.
Uma kunjalo, futhi singenaso isipele, sizolahlekelwa LONKE ulwazi esilugcine esigungwini sethu. Ukugwema lolu hlobo lwenkinga, ngaphambi kokubuyekezela enguqulweni entsha yohlelo lokusebenza, kulokhu i-iOS 13, kufanele yenza ikhophi eyisipele yedivayisi yethu nge-iTunes.
Ukwenza isipele nge-iTunes, kufanele sixhume i-iPad yethu noma i-iPhone kwikhompyutha, vula i-iTunes bese uqhafaza kusithonjana esimele idivayisi yethu. Ewindini elizokhonjiswa, kufanele chofoza ku-Backup. Inqubo Kuzothatha isikhathi esithe xaxa noma esincane ngokuya ngesikhala esingene kuso kudivayisi yethu ngakho-ke kufanele sikuthathe kalula.
Uma sinohlelo lwesitoreji se-iCloud, zonke izithombe zethu zisefwini, kanye nayo yonke imibhalo ehambisana nensizakalo yokugcina amafu yakwa-Apple. Lokhu thina uzokugwema ukwenza isipele kusuka esikhumulweni sethu ngoba yonke imininingwane ekuyo igcinwa ngokuphepha. Lapho ukuphela sekuvuselelwe, kuzofanele siphinde silande zonke izinhlelo esizifakile.
Uma sifuna gcina izicelo ezifanayo ebesinazo ne-iOS 12, Ngaleyo ndlela sihudula zonke izinkinga engizichazile ngenhla, singenza ikhophi eyisipele yesiginali yethu ku-iCloud, ukuze kuthi uma isivuselelwe, sikwazi ukubuyisa zonke izinhlelo zokusebenza ebesizifakile.
Ibuyekeza ku-iOS 13
Ngemuva kokwenza zonke izinyathelo engizichazile ngenhla, umzuzu owufunayo we- buyekeza ku-iOS 13. Singayenza le nqubo kusuka ku-iPhone yethu noma i-iPad noma ngqo kusuka ku-iTunes. Uma sikwenza kusuka ku-iPhone noma i-iPad kufanele senze lezi zinyathelo ezilandelayo:
Vuselela ku-iOS 13 kusuka ku-iPhone noma ku-iPad
Ngaphakathi kokuvuselelwa kweSoftware kuzoboniswa ukuthi sinenguqulo entsha ye-iOS esizoyifaka, ikakhulukazi i-iOS 13. Uma uchofoza kuyo, i- imininingwane yale nguqulo entsha.
Ukuqhubeka nokufakwa, kufanele sichofoze ku- Landa bese ufaka.
Ukuze ukuvuselelwa kwenzeke, ukuphela kwethu kufanele kube ixhunywe kunethiwekhi ye-WiFi neshaja. Ibhethri lokugcina kufanele libe ngaphezu kwama-20% ukuze inqubo yokufaka iqale.
Vuselela ku-iOS 13 kusuka ku-iTunes
Uma ungumuntu wakudala futhi ufuna ukuqhubeka nokubuyekeza idivayisi yakho nge-iTunes, nazi izinyathelo okufanele uzilandele.
Okokuqala kufanele xhuma i-iPhone yethu noma i-iPad kwikhompyutha.
Sivula i-iTunes bese siyachofoza kuyo isithonjana esimele idivayisi sifuna ukuvuselela.
Engxenyeni engaphezulu kwesokudla, lapho kukhonjiswa khona imininingwane yesiginali, chofoza ku Bheka isibuyekezo.
Uma sesamukele imibandela, i-iTunes izoqala landa isibuyekezo futhi kamuva uvuselele idivayisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungayifaka kanjani i-iOS 13 noma i-iPadOS ku-iPhone yakho noma i-iPad
I-Huawei Mate 30 ne-Mate 30 Pro: Ukuphela okuphezulu kuvuselelwe